Zuva: Kukadzi 5, 2020
Balıkesir Metropolitan Municipality inoenderera mberi nekuita zvirongwa zvekufambisa kupa nekukurumidza, kwakachengeteka uye kwakafambiswa zvakanaka mukufambisa muguta. Nekuraira kweMetropolitan Meya Yücel Yılmaz, iyo traffic traffic [More ...]
Ankara Vantu Vanoda Mobile Tiketi Kushanda
Ankara Metropolitan Municipality, iyo inonyatsoteedzera zviitiko zvetekinoroji uye smart system system, yawedzera imwe nyowani kune yayo mobile application series. Maguta meguta anounganidza vashanyi vekunze nevekunze vanouya kuguta guru uye guta guru. [More ...]
Enderera Kusevenzesa muNzira Tsva mbiri muArifiye
Meya Ekrem Yüce, uyo akatsanangura nezvekuenderera mberi kwebasa rakapetwa munzira iyo ichava imwe nzira yekufambisa yeArifiye mudunhu, akati, "Inoenderera munzira ichangopera Tank Pallet Factory kubva kuTeminal Junction uye Demir [More ...]
Mufaro weChibvumirano cheKuunganidzwa Kwekutengesa kuKayseri Transportation Inc.
Kayseri Metropolitan Municipality Transportation Inc. uye chibvumirano chakabatanidzwa chevashandi, icho chinosanganisira vashandi gumi nevaviri, chakasainwa nemhemberero iyi. Vachitaura pamhemberero yekusaina, Metropolitan Municipality [More ...]
Mutyairi webhazi, aive nebasa rekurwa pakati pevaipfuura nekuda kwe 'kudya nucleus' mubhazi revanhu vese muBursa, akabviswa pabasa. Mune chirevo chakaitwa pachinyorwa ichi, "Nhasi, mune mamwe ma media media uye nzira dzenhau dzakavanzika." [More ...]
Gurukota rezvemaindasitiri nehunyanzvi, Mustafa Varank akakoka vagari kumutambo weNational Sky Observation festival uye akazivisa kuti vatambi vepasi rose vachatarwa kekutanga gore rino. Minister Varank, pa Twitter, musi wa Nyamavhuvhu 20-23 muAntalya Saklıkent [More ...]
Nhamba yeMetrobus Expeditions Yakawedzera
IMM yakawedzera huwandu hwemotokari uye nzendo dziri pamutsetse we metrobus zvichienzaniswa nemwedzi yechando yegore rapfuura. Avhareji yemotokari makumi maviri anosvika pazviteshi panguva dzekukwirisa. Kune mazana matatu emabhazi matsva kutsiva mota dzekare [More ...]
Cengiz İnşaat Akasaina Karawaski Mugero Wokuvaka weSlovenia
Cengiz İnşaat akasaina kanzuru ye 98,5 miriyoni yemakona emugodhi wekuti kuvaka kwechipiri mutsetse weKarawaski Tunnel kuvhurwe neSlovenia pakati peSlovenia neAustria. Cengiz İnşaat, Sloveya yakakwira kambani DARS 3 [More ...]
TCDD Logistics Center Workhop yakaitwa
Mukati meiyo chiyero che "TCDD Logistics Achibudirira Kuvandudza System Kuongorora uye Bhizinesi Model Yokutsidzira Project" inoitwa mukubatana neTCDD General Directorate uye TÜBİTAK TÜSSİDE, "Logistics, inosanganisira yeruzhinji, academy uye yakazvimiririra chikamu. [More ...]